6 nhau dzaApril. Aramburu, Vila-Matas, Márkaris, Sánchez ... | Zvazvino Zvinyorwa
6 nhau dzaApril. Aramburu, Vila-Matas, Márkaris, Sánchez ...
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Zvakare April, mwedzi watinogona kudaidza kubva mumabhuku. Uye semwedzi wega wega tinowanawo zvinonakidza mazano Kuverenga. Izvi ndizvo 6 yesarudzo yangu: mazita matsva emhando nemazita akasiyana seaya e Fernando Aramburu, Clara Sánchez, Catherine O'Connell, Petros Márkaris, Enrique Vila-Matas kana Néstor F. Marqués. Ngatione zvavanotiunzira.
1 Mudiwa Wakanyarara - Clara Sánchez
2 Nhema nhau kubva kuRoma yekare - Néstor F. Marqués González
3 Yunivhesiti yeAassassins - Petros Márkaris
4 Iyi mhute isina musoro - Enrique Vila-Matas
5 Tsinga dzakadzika - Fernando Aramburu
6 Kuvimba nekutengesa - Catherine O'Connell
Mudiwa akanyarara - Clara Sanchez
Uyo anokunda iyo Nadal Mubairo Novel in 2010 kubudikidza Chii chinovanza zita rako, and the Planet Mubairo en 2013 game Denga radzokaZvino chibuda mubhuku idzva iri.
Iye protagonist ndiye Isabel, mukadzi anoshanda muAssociation yeVanovimba Vakatambudzwa uye anogamuchira chikumbiro chakasarudzika: kuenda kuMombasa, nzvimbo yeKenya, ku tsvaga uye ununure kune murume wechidiki anonzi Ezekieri, waakatapa sekete, reHumanitarian Order, iyo inovanza nyaya dzine mumvuri.
Isabel anobvuma nekuti achiri kunzwa mhosva kwaari kuzviuraya hama yake kuti ndiye akabatwa neimwe sekete uye kuti aisakwanisa kubatsira. MuMombasa tora infiltrate hurongwaasi mutungamiri wavo, murume anonzi
Maine, ane tsika dzakanaka uye anofungidzirwa kuti ane mutsa, anomufungira.
Rimwe zuva Ezekieri anonyangarika uye Isabel anosarudza kubvunza rubatsiro apererwa. Taura ne Akati, murume asinganzwisisike anogara achionekwa panguva yakakodzera uye akavimbisa kumuchengeta. Vaviri vachaedza kutsvaga nekufumura zvakavanzwa neboka iri nemutungamiri waro.
Nhema nhau kubva kuRoma yekare - Nestor F. Marqués González
Marqués González ndiye munyori we Gore muRoma Yekare uye ikozvino zvinodzoka nemusoro mutsva uyu. Chirevo chemufashoni chave kushandiswa kune nyika yeRoma mubhuku rino rinoburitsa iyo hunyengeri, kunyepa uye kunyepa avo vakatiudza nezvenhoroondo ye Roma yekare.
Kubva avo vakasika, dzimwe nguva vasingadi, zvavo vanyori venhoroondo, kana izvo zvakaumbwa nekufamba kwenguva. Zvakare lkusafa mumamuvhi, akateedzana uye enganonyorwa, uye kunyangwe avo vane rudo vakasika pamusoro pavo. Nekuti pamwe Nero haana kuisa Roma pamoto ...
Yunivhesiti yemhondi - Petros Markaris
Markaris adzoka, saka dzoka Zvirongo. Iye veteran Hellenic munyori anotumira iyo umpteenth novel wemupurisa uyu semhare sezvaari.
Ino nguva Kostas Jaritos anga ari vacations munyika yavo, kuchamhembe kweGirisi. Paanodzoka, anowana nhau kuti iyo director Guikas anoenda pamudyandigere, saka nzvimbo yako ichave isina munhu parizvino. Asi Guikas anokumbira Jaritos kuitira kuti tora chinzvimbo chako pane zvenguva pfupi, netariro kuti achazopedzisira ave iye akasarudzwa.
Ipapo ipapo gurukota, aimbova purofesa weyunivhesiti akawana akafa weMutemo. Sezvinei akadya a Cake chepfu akaunzwa kwaari nemunhu waasingazive. Uye kufarira kwake maswiti kunomutungamira kune iyo inouraya hupenyu. Asi iko kutsvagisa kunoratidzika kunge kuri pamusoro penyika yeyunivhesiti kupfuura nyika yezvematongerwo enyika. Saka tichaona kana Jaritos achikwanisa kuve shefu kana ichigadzirisa nyaya yacho.
Iyi inopenga haze - Enrique Vila-Matas
Vila-Matas inofungidzirwa mumwe wevanonyanya kutaura nyaya. Mune ino novel anoita a kufungisisa nezvezvinyorwa zvekusika. Iyo inopesana nemanzwi maviri: iya yekutenda mukunyora uye panguva imwechete kusada nekuiramba. Ivo vaviri vanogona kuzadzikisa fusion kuitira kuti iyo chaiyo chaiyo mavambo ibude.
Iye protagonist ndiye Simon schneider, UN hokusai, un wekutengesa zvekufambidzana kune vamwe vanyori, uye anoshandira munyori we blockbuster anozviti Big Bros anogara mukuhwanda muNew York. Rimwe zuva masikati Simon yakavharwa kuyedza kurangarira chirevo ndokusiya kupotera kwake kuCadaqués kuti afambe rwendo rurefu kutsvaga iyo musangano iyo isingaoneke.
Tsinga dzakadzika - Fernando Aramburu
Fernando Aramburu achiri kuyedza kugaya kubudirira kukuru kwe Patria, uye ikozvino vhura izvi sarudzo yenhetembo yako yaunofarira. Nekuti kwaari nhetembo iri kuzviendesa kunzvimbo yakachengeteka, kure nemheremhere yezuva nezuva, utiziro iwe unofanirwa kuenda nguva nenguva. Saka anotizivisa kune vamwe vake nhetembo dzinodiwa vanosaina mazita senge Rosalía de Castro, Góngora kana Vallejo, kungodudza mashoma. Uye iye zvakare anovabatanidza ivo kune echokwadi kubva kuhupenyu hwake ruzivo.
Kuvimba nekutengesa - Catherine O'Connell
Uyu munyori weAmerica anoburitsa zvitsva kunyengera rungano uko protagonist, Maggie chokwadi, anomuka ari pamubhedha wake padivi pe mutorwa mangwanani akatevera ake Bachelorette pati. Asi chakaipisisa ndechekuti shamwari yake Angie apondwa. Ipapo mudiwa waMaggie apo neapo anova mukuru wekufungidzira mukuponda.
Anoshamisika kana achifanira kumubatsira nekureurura kuti akarara naye usiku kana kunyepa kuchengetedza imba yake yemangwana. Kunyange, mapurisa anoongorora imwe neimwe yeshamwari dzake uye inoburitsa zvakavanzika zvinoita sezvisingakoshi. Saka vamwe vacho vanonyepa kana pamwe vese vanoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 6 nhau dzaApril. Aramburu, Vila-Matas, Márkaris, Sánchez ...
Yevana nevechidiki Zuva reBhuku. 6 kuverenga kuve kupemberera
Jo Nesbø. Makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Mamwe mazwi kubva kuvaverengi vake nezvake